आमा विन्देश्वरी भन्छिन्, 'आलु तामा र मासुभात भएपछि छोरोलाई केहि चाहिंदैन !' (भिडियोसहित)
ARCHIVE, BANKING » आमा विन्देश्वरी भन्छिन्, 'आलु तामा र मासुभात भएपछि छोरोलाई केहि चाहिंदैन !' (भिडियोसहित)
विन्देश्वरी शाह, अर्थात अनिल केशरी शाहकि आमा । 'पहिला यो मेरो छोरा भनेर चिनाउँथें, अहिले अनील शाहकी मुमा' भनेर चिनाउँदा खुव खुसी लाग्छ उनलाई । महिलाहरुको सक्षमताको उदाहरणीय पात्र बनेकी उनी आज छोराको सफलताको खुसीमा ठुलो गर्व गर्छिन् ।
एक छोरा गुमाउँदाको पीडा छ उनलाई । जिन्दगीमा धेरै आरोह-अवरोहहरु आए । केहि तीता क्षणहरु छन् । केहि मीठा पलपनि । आमा हुनुको गर्व र छोरा सफल हुनुको खुसी । आखिर अनुभव न रहेछ जिन्दगी । हेरौं बैंकर अनील केशरी शाहकि आमाको अनुभव कथा उनकै मुखबाट :